सम्पर्क गर्दा पुरुषको लि४० ङ्ग यस्तो भएमा महिलाले पुरा सन्तु४० स्टि पाउछिन् !!! – News Nepali Dainik
सम्पर्क गर्दा पुरुषको लि४० ङ्ग यस्तो भएमा महिलाले पुरा सन्तु४० स्टि पाउछिन् !!!
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ०९, २०७७ समय: २२:२२:३३
लिङ्गको औसत आकार के हो त ? निकै समयसम्म अनुत्तरित यस प्रश्नको हाल वैज्ञानिक उत्तर फेला परेको छ । विश्वका १५ हजार भन्दा बढी लिङ्गमा विश्लेषण गरेपछि अनुसन्धाकर्ताहरूले उत्तेजित अवस्थामा लिङ्ग औसतमा १३.१२ सेन्टिमिटर (५.१६ इन्च) लामो हुनुपर्ने तथा यसको मोटाइको बाहिरी घेरा औसतमा ११.६६ सेन्टिमिटर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । शिथिल अवस्थामा लिङ्ग औसतमा ९.१६ सेन्टिमिटर लामो हुनुपर्ने र त्यसको मोटाइको बाहिरी घेरा औसतमा ९.३१ सेन्टिमिटर हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ ।
यस अनुसन्धानमा सहभागीले आफ्नो लिङ्गको मापन पेशागत व्यक्तिबाट गराएका थिए भने बेलायती अनुसन्धानकर्ताहरूले यसरी अफ्नो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थिए । उनीहरूले बहुङ्ख्यक पुरुषले आफ्नो लिङ्गको आकार औसत भएको फेला पार्ने बताएका छन् । यस समूहले यसपछि यी तथ्याङ्कलाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गरेका छन् र ‘लिङ्ग सानो भयो भनी चिन्ता गर्ने’ व्यक्तिलाई परामर्श दिन चिकित्सकले यस विश्लेषणलाई प्रयोग गर्नसक्ने बताइएको छ । यस्ता विषयमा धेरै चिन्ता गर्ने पुरुषमा ‘बडी डिसमोर्फिक डिसअर्डर’ हुनसक्ने बताइएको छ ।
यस्तो दुर्बल मानसिक अवस्थामा पुरुषमा असामाजिक व्यवहार, उदासीपना तथा आत्महत्याको प्रवृत्ति देखापर्नसक्ने बताइएको छ । वास्तवमा केबल २.२८ प्रतिशत पुरुष जनसङ्ख्यामा असमान्य रूपमा सानो लिङ्ग हुने यस अध्ययनमा देखिएको छ । यसै गरी यस्तै प्रतिशतमा असामान्य रूपमा ठूलो लिङ्ग हुने पनि यस अध्ययनमा देखिएको छ । यस अध्ययनमा १७ वर्षदेखि ९१ वर्षका पुरुष सहभागी भएका छन् । उनीहरूले युरोप, एसिया, अफ्रिका तथा अमेरिकामा यसअघि गरिएका २० अध्ययनमा भाग लिएका थिए र आफ्नो लिङ्गको मापन गरेका थिए ।
यस अध्ययनमा जातिको आधारमा लिङ्गको आकार फरक परेको प्रमाण फेला नपरेको बताइएको छ । यस अध्ययनमा भाग लिने प्रायः व्यक्ति युरोपेली तथा मध्यपूर्वी भागबाट आएका व्यक्ति भएकाले यस तथ्याङ्कमा पूर्ण तुलना गर्न नसकिएको बताइएको छ । यसै गरी अनुसन्धाकर्ताहरूले पुरुषको खुट्टाको आकार तथा उसको लिङ्गको आकारमा कुनै पनि सम्बन्ध फेला नपरेको बताइएको छ । सामान्य व्यक्तिभन्दा आफ्नो लिङ्गको आकार ठूलो भएको कुरामा विश्वस्त भएका पुरुषले मात्र यस अध्ययनमा भाग लिएको हुनसक्ने सम्भावनाका कारण यो अनुसन्धान केही हदसम्म उनीहरूतर्फ ढल्केको हुनसक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले स्वीकार गरेका छन् । यस अध्ययन समूहले आफ्नो अनुसन्धानात्मक लेख मूत्रविज्ञानसम्बन्धी पत्रिका ‘बीजेयु इन्टरनेसनल’ मा प्रकाशित भएको बताएका छन् ।
उनीहरूले लिङ्गको लम्बाइ तथा मोटाइका विषयमा हालसम्मका सबै तथ्याङ्कलाई यस अध्ययनमा पहिलोपटक एकीकृत गरिएको दाबी गरेका छन् । यस सूचनालाई आफ्नो लिङ्गको आकारका विषयमा चिन्ता गर्ने व्यक्तिलाई आश्वस्त बनाउन उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ । अर्कोतिर आफूले असाधारण रूपमा ठूलो लिङ्ग पाएको भनी घमन्ड गर्ने व्यक्तिलाई यस अध्ययनले निराश पार्नसक्ने पनि अनुमान गरिएको छ । यस अध्ययनका कारण पुरुषलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने आकारको कन्डम प्राप्त गर्न चिकित्सकले सहयोग गर्नसक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।
Last Updated on: March 22nd, 2021 at 10:22 pm
६८१ पटक हेरिएको